आमाको पीडाले उब्जाएको प्रश्न |
आमाको पीडाले उब्जाएको प्रश्न
प्रकाशित मिति :2017-10-06 10:37:39
खासगरि अधिकारकर्मी महिलाहरूले नागरिकताको बिषयमा धेरै आन्दोलन गरेको देख्छु । संविधानसभाको निर्वाचन हुनुभन्दा पहिले देखिनै हरेक सन्तानले आमा वा बुबा दुबै नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने माग छ अधिकारकर्मीको ।
तर, आमा र बुबा दुबैको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्थासहितको विधेयक दोस्रो संविधानसभाले बहुमतका साथ पास गर्यो । ‘वा’ अनि ‘र’ को विषयमा वर्षौदेखि भएका बहसहरू मध्ये ‘र’ को पल्ला भारी भयो । अर्थात आमा वा बुबा कुनै एक जना मात्रको नामबाट पनि सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने अधिकारकर्मीहरूको माग अहिलेसम्म पनि सफल हुन सकेको छैन । यद्यपि यदाकदा बहस भने जारी रहेको देख्न सुन्न सकिन्छ ।
हो, यो अवसर मेरो लागि कहिल्यै जुरेन । म गर्भवती भएँ भन्दा उल्टै कसरी भयौं भन्ने ? प्रश्न । जवाफ के दिनु ? कसरी दिनु ? अनि के का लागि दिनु ? पहिलो पटक गर्भवती हुँदा श्रीमानले यो मेरो गर्भ होइन भनेपछि मर्न नखोजेको हो र ! तर खोई, सायद यति चाँडै मर्नु पनि भाग्यमा लेखेको रहेनछ । अनि श्रीमानले अस्वीकार गरेको गर्भलाई के का लागि जन्म दिनु सोचँे । र उसैले भनेअनुसार उसको पछिपछि लागेर पुगे, मेरीस्टोभ सेन्टरमा । त्यहाँ कार्यरत स्टाफ नर्सले मेशिनको सहायताले टुक्रा टुक्रा पारेर निकालिन्, ११ हप्ताको शिशु ।
करिब २४ घण्टा कुर्दा समेत नर्मल डेलिभरी नभएपछि मेरो अप्रेसन गरियो । अप्रेसनपछि अप्रेसन कक्षबाट नर्शहरूले पहिला शिशुलाई आफन्तको जिम्मा लगाउँदा रहेछन् । त्यतिबेला श्रीमानजी त्यहाँ रहेनछन् । पहिलोपटक मेरो छोरीलाई अरुलेनै समातेछन् । अप्रेसनको पाँचौ दिन अस्पतालबाट माइतघर फर्किए । घर फर्किएकै दिन मेरो माइतीमा उसले आफ्नै आमाको अगाडि मलाई टर्चर दिन सुरु गर्यो । यो मेरो छोरी होइन भन्यो । म रुन थाले । म रोएको मेरी आमाले थाहा पाउनु भो । किन रोइस् त ? के भयो ? कसले के भन्यो भन्न थाल्नु भो ? मैले कुरा अन्तै मोडिदिए । कसैलाई त्यो कुरा भनिनँ । सुत्केरी अवस्थामा उ मसँगै बसिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लागिरह्यो । तर, उ आउथ्यो, दुई चार मिनेट टहलिन्थ्यो, नानीलाई काखमा बोकेर घरबाहिर जान्थ्यो । अतिनै माया गर्दोरहेछ भने झैं नानीको शरीर भरि माया गर्दथ्यो । अनि जान्थ्यो । त्यसपछिका दुई वर्ष उसका छोरीप्रति यस्तै देखावटी प्रेम गरेरै बिते । रात दिनको किचलो, कुटपिट, गाली बेइजती अनि परस्त्रीसँगको उसको नाजायज सम्बन्धले हामीबिचको सम्बन्ध सूमधुर हुन सकेन । झगडाको स्तर हरेक दिन बढ्दै जान थाल्यो । उसले छोरीलाई मप्रति रिसाउन, गालीका शब्द प्रयोग गर्न, तुच्छ बोल्न सिकाउदै जान थाल्यो । अनि छोरीकै अगाडि हात छोड्ने र अश्लिल शब्दले गाली गर्न नछोडेपछि मैले घर छोड्ने निधो गरेँ । अहिले छोरी बोकेर अर्कै शहरमा बस्छु । म अलग बसेको पनि ढाई वर्ष बितिसक्यो । यो बिचमा उसले छोरीसँग बिगतमा खिचेका फोटाहरू फेसबुकमा पोष्ट गर्ने र मलाई गाली गर्नेबाहेक छोरीको जीवनका लागि कुनै राम्रो काम गरेको छैन ।
पेटबाटै बुबाबाट स्वीकार नगरिएकी मेरी छोरी मसँगै खुसी छिन् । बाबाको औंला समातेर तोते बोल्ने समयमा बाबाको दिर्घकालिन् माया ममता पाइनन् । पाइन् त केवल क्षणिक अनि देखावटी माया । छोरी जन्मिएको एक वर्षमै उसको जन्म दर्ता गर्न गएँ, नगरपालिकाले बुबा आमा दुबैको नाम बिना जन्म दर्ता हुँदैन भन्यो । दुई पटक गए फर्किए । म चाहन्थे, जन्म दर्तामा मेरो मात्रै नाम होस् । जसले पेटदेखिनै स्वीकार गरेको छैन, उसको नाम मेरो छोरीको जन्म दर्तामा कसरी राखौं ? ठूली भएपछि बाबुले पेटबाटै आफूलाई स्वीकार नगरेको थाहा पाएपछि त्यहि बाबुको नाम जन्म दर्ताको सर्टिफिकेटमा भेट्दा मेरो छोरीलाई हुनसक्ने हिनताबोधको पीडा म कसरी मेट्न सक्छु ? छोरी पेटमै मारिन्थी, मैले जन्माए । उसलाई कुनै कुराको कमी हुन दिएकी छैन । मेरो क्षमताले भ्याएसम्मको सबै सुख, सुविधा र शिक्षा दिइरहेकी छु । तर, उसको जन्म दर्तामा जिम्मेवारी लिन नसक्ने, नचाहने गैर जिम्मेवार बाबुको नाम चाँहि किन अनिवार्य ? जसले जीवन दिन मानेन, मैले जीवन दिएँ, अनि फेरी त्यहि हत्यारा बाबुको नाम किन जरुरी ? यदी आज मैले त्यहि हत्यारा अनि गैर जिम्मेवार बुबाको नाम राखेर जन्म दर्ता गरेँ भने, यी सबै कुरा जस्ताको तस्तै भोलीका दिनमा मैले मेरो छोरीलाई सुनाउँदा उसलाई हुनसक्ने हिनताबोध र मानसिक पीडाको जिम्मेवार को हुन्छ ? अनि त्यतिबेला मेरो छोरीले यो राज्यका बिरुद्ध आफुमाथि थोपरिएको जर्वजस्ती कानुनी नाता खारेजीको माग गरिन् भने के राज्यले उसलाई हुन जाने मानसिक पीडाको क्षतिपूर्तीसहित न्याय दिन सक्ला ?